Yintoni ebaluleke kakhulu kwi-SEO yewebhusayithi kwenkampani yokuqeshisa iholide?
I-ejensi yokuqeshisa iholide yinkampani yonyaka. Nangona kunjalo, ukuba uphelela phantsi kwezithuthi ze-injini yokukhangela, ulahlekelwa ngamathuba akho shishini kunye nokuthengisa. Ukwenza ibhizinisi lakho liphumelele, kufuneka udale iwebhusayithi ene-user-friendly kwaye uyilungiselele ngokwemiqathango yonke yeGoogle - amazing walk in robes. Ngokusebenzisa iindlela eziphambili ze-SEO, uya kukwazi ukuphucula i-rankings site yakho kwaye ukhange i-traffic quality kwiwebhusayithi yakho yokuqeshisa iholide. Nazi ezinye iincophiso ze-SEO ezicacileyo eziza kukunceda ukuphucula ubukho bakho bekhompyutha.
Ukufumana impendulo efanelekileyo malunga nombuzo womsebenzisi, i-bots search engine idibanisa i-website yakho ye-VR yewebhusayithi ethile kwimigqaliselo ethile yophando. Ukuba umxholo wakho wewebhusayithi ulingana nombuzo womsebenzisi, ngoko i-Google isebenzisa njengombonakaliso wokuphucula umgangatho wakho njengesizinda esisemthethweni nesifanelekileyo. Ukudibanisa nemibuzo yakho yamakhasimende, unokucinga ukuba yeyiphi imigqaliselo yabasebenzisi abaza kukhangela ukuba bazama ukufumana i-arhente yezobugcisa, kwaye zibandakanya la magama angundoqo kumxholo wakho.Ungasebenzisa imiqathango efana ne "indawo yokuqeshisa iholide" okanye "inkampani enika iinkonzo zeholide zokuqeshisa. "Nangona kunjalo, ezi binzana eziphambili zikhuphisana kakhulu kwaye zingenakukuzisa ezininzi izithuthi. Yingakho kufuneka uqikelele ngamagama amabakala asekude asetyenziswa ngabantu kwiintetho zansuku zonke. Ukwenza lula uphando lwegama elingundoqo, ungasebenzisa izixhobo ezizodwa ze-intanethi njenge-Semalt Auto SEO okanye i-Google Keyword Planner.
Iinkcazelo zeMeta ziphawuleka kubungqina bakho bezoshishino kwi-intanethi njengoko zibonisa kubasebenzisi abasebenzisayo ukuba indawo yakho ikuphi. Isebenza njengemboniso kwisiqulatho sewebhu kwaye sinceda abantu ukuba bathathe isigqibo sokuba ngaba bafuna ukulandela umthombo wakho wewebhu ngolwazi oluninzi okanye cha. Ngaphezu koko, kubalulekile ukongeza i-traffic-gaining keywords kwiimeta zakho zeemeta ukuvumela i-bots search indawo yakho. Iingcaciso zeemeta ezicwangcisiweyo ziza kuphazamisa umlinganiselo wokuqhafaza kwaye uphucule inkampani yakho yokuqeshisa iholide i-SEO.
. Kuthatha nje imizuzu emininzi ukudala i-akhawunti yoshishino kwi-Facebook okanye kwi-Instagram. Nangona kunjalo, linika inkampani yakho amandla amakhulu kwihlabathi lentlalontle. Xa udala iinkcazo zakho zeprofayili ezahlukeneyo, yakha umxholo oyingqayizivele kuwo ngamnye. Ngaphezu koko, qwa lasela umboniso wembonakalo njengoko abasebenzisi baqonda ukuba bhetele kuneetekisi. Yingakho ukudala imifanekiso esemgangathweni, iifriji zevidiyo, kunye nevidiyo ukuze wenze i-akhawunti yakho yezoshishino kwimicimbi yoluntu ekhangayo kubalandeli bakho.
Unokucela ukuba amashishini akho asekuhlaleni adibanise indawo yakho yokuqeshisa iholide kumaphepha abo abalingani. Ngaphezu koko, unokufumana inzuzo kwibhulogi yokuthumela, ukusebenzisana nabaholi beengcamango kwi-market niche. Ukuqhagamshelana nesakhiwo yindlela yokukhuthaza ukuvumela ukushishina yakho.